1 Sida loo isticmaalo facetime on iPad – download facetime for facetime iPad on iPad aan shaqayn
2 FaceTime on iPad ah:
3 Ultimate Hagaha bilow FaceTime on iPad:
4 Daar Face Time Feature on Your aan loo gashto:
5 Isticmaal Time Face Call On iPad:
5.1 Click on the icon Face Time:
5.1.1 Hel Your baahan yahay Contact:
6 macluumaad Contact Panel
6.0.1 Dhig video call ama maqal ah la xidhiidh ee la doortay:
6.1 Inbadan oo ka socda goobtayda
Sida loo isticmaalo facetime on iPad – download facetime for facetime iPad on iPad aan shaqayn
U soo degso Wareegtada loogu talagalay ipadka
Apple ayaa had iyo jeer keenay ugu fiican ee macaamiisheeda. Waxay leedahay si joogto ah xoogga u bilowdo apps kuwa ama software taasoo keeni karto farxad iyo sahlanaato in ay macaamiisheeda. Saamaynta warbaahinta bulshada ayaa gelitaanka maqalka.
facetime for ipad tufaax
facetime waayo, android in iPad
Dadka da 'kasta doonayaa inaan sii joogo la xiriira midba midka kale. Ujeedada this, Apple si gaar ah loogu app a videotelephony heer sare ogyahay sida FaceTime for macaamiisheeda.
App Tani waxaa si gaar ah loogu talogalay dhammaan dadka isticmaala Apple isticmaalaya iPhone, Mac, iPod, iyo iPad. Ka mid ah dhammaan qalabka kale ee Apple, dadka jecel in ay isticmaalaan iPad ah. Its screen ballaaran iyo natiijada tayada wanaagsan u ogolaan macaamiisha in ay ku raaxaystaan ​​muuqaalada iyo apps ay la yaabka lahaa marka la barbar dhigo qalabka kale ee.
Waxaad isticmaali kartaa FaceTime on iPad in ay aragti ballaaran oo ku saabsan video call. Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa qoto-dheer muhiimadda, dajinta, rakibaadda, Isticmaalka, iyo muuqaalada Face Time for iPad.
FaceTime waa video layaab leh oo app yeedhayso audio la abuuray markii hore iPhone4, laakiin baahida sare qasbi Apple si ay u diyaar u ah dadka isticmaala iPad iyo sidoo. iPad aad bixisaa muuqaalada kala duwan laakiin mid ka mid ah qaababka ugu soo jiidashada badan waa in aad si fudud u dhigi karto video ama audio calls dhex FaceTime.
Waxaad isticmaali kartaa Face Time si aad u hesho isku xiran la user kale oo uu leeyahay iPad la MAC OS 10.6.6 ama qoraalkii ka dib. Waxaa laga yaabaa inaad si aad u hesho qof in ay Apple Id. video iyo maqal ah ayaa ku baaqay in loo marayo FaceTime yihiin gabi ahaanba bilaash ah. Waxaad isticmaali kartaa xiriir aad internet ama macluumaadka gacanta si ay u bilaabaan wacayaan.
FaceTime on iPad ah:
app FaceTime waxaa dhab ahaan loo qorsheeyay macruufka ah users oo ay ku jiraan iPhone, iPads, iPod, iyo Mac. app wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sii joogtid taabto marka aad ka heshid reerkaaga ka maqan tahay, saaxiibo, ganacsiga, iyo shaqaalaha.
Haddii aad raadinayso isticmaalaya this app videotelephony caanka on your iPad, markaas ha ka welwelin uma baahnid inaad wax sameyso. Apple ayaa hore u rakiban app FaceTime ku iPads aad.
Waxaad u baahan tahay oo kaliya aad ID Apple si aad u bilowdo this app pre-rakibay FaceTime on iPads aad. Tani waa in ay ahaadaan xiiso leh si aad u ogaado in marka aad leedahay iPad, aad diyaar u ah oo tayo sare leh video ama audio calls dhex FaceTime yihiin oo aan wax mashaakil ama geedi socodka dheer ee dajinta.
Iyada oo taageero ka FaceTime on iPads, waxaad si fudud u samayn karaa ama heli video aan xad lahayn oo ku baaqay in audio. Sida app this waxaa loogu talagalay dadka isticmaala macruufka ah oo keliya, si aad u samayn kartaa oo kaliya video ama taleefoonka ku baaqay in kuwa isticmaala kuwaas oo isticmaalaya iPhone, Mac, iPod, iyo qalabka iPad. Waxaad si toos ah u dhigi karto call a in dadka isticmaala iPad adigoo isticmaalaya email id oo ay waa in caadi ahaan laga heli karo liiska xidhiidhka.
Ultimate Hagaha bilow FaceTime on iPad:
iPad 2 ama ka dib ayaa camera ah loo dhisay oo sahlaysa in aad si ay u qabtaan video oo ku baaqay in loo marayo FaceTime. Tani app interactive kuu ogolaanaysaa inaad la hadasho dadka aad jeceshahay marka aad ku fogaaday ka.
Face Time dhex iPad aad bixisaa dhammaan qaababka caan ah laakiin ma qabsato kartaa mugga ay app iyo sidoo kale haddii aanad samayn karin duubo wicitaanada video aad. laakiin weli, waxaa bixiya dhammaan qaababka kale oo faa'iido leh in u sameeyo tartan si ay u isticmaalaan.
Daar Face Time Feature on Your aan loo gashto:
Waxa ugu muhiimsan waa, hor inta aadan isticmaalin Face Time ee iPads aad, hubi in aad on pre-rakibay feature Face Time jeestay, waxaad ku samayn kartaa:
Tag menu goob taas waxaa laga heli karaa Home Page aad iPad ah.
Markaasuu, riix feature Face Time in ay soo jeedin u dhaqaajiso.
Waxaad sidoo kale raaci kartaa habka la mid ah haddii aad rabto in aad ku meel gaar ah dami feature ka iPad.
In menu goob aad iPad ah, waxa kale oo aad dooran kartaa liiska oo dhan xiriirada in aad rabto in lala xiriirinayo dhex FaceTime. Waxaad ku samayn kartaa xulashada cinwaanada e-mail iyo xisaabaadka phone.
Isticmaal Time Face Call On iPad:
Waxaad u dhigi karto oo kaliya wicitaanada aad FaceTime kale dadka isticmaala qalab Apple. Taas macnaheedu waxa weeye in aad Haydadda karaa Face Time leh users kale kuwaas oo la isticmaalayo
iPad 2 ama ka dib, ama
Mac OS X ordaya 10.6.6 ama
iPhone4 ama ka dib ama
Tan afraad jiilka iPod taabashada ama ka dib
Ka hor inta ugu yeeray mid ka mid ah dadka isticmaala qalab Apple, hubi in aad isaga ku daray in ay xiriir iPad. Saarid video ama call audio aad iPad waa idishay fudud. Waa inaad u raac talaabooyinka yar oo ay ku jiraan.
Click on the icon Face Time:
Sida horeba looga hadlay, Face Time waa feature a pre-rakibay on iPads aad. Waxaad si fudud u heli karaan in ay icon on screen guriga of iPads aad u. Marka aad riix doonaa on icon Face Time, waxay ku waydiin doonaan inaad siiso macluumaadka loo baahan yahay.
ayaa la rejeynayaa in aad geli id ​​e-mail iyo lambarka taleefanka cidda aad rabto in aad bilowdo wadahadalka. Ka dib markaad gaartey xiriirka loo baahan yahay, waxa keliya ee aad u leeyihiin in ay guji badhanka soo socda.
Hel Your baahan yahay Contact:
On shaashadda weyn ee app FaceTime, waxaad ka heli doontaa liiska xiriirada in muuqan doonaa dhinaca midig ee shaashadda. Marka aad ka heli doontaa account of user ah in aad rabto in aad la xiriiri, riix on magaciisa ama magaceeda.
By gujinaya magiciisa, waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka muhiimka ah ee user in. Liiska waxay muujinaysaa tiro guriga ay, nambarka taleefonka, cinwaanka email iyo option kale sida share xiriir, ku dar si ay ugu cadcad iyo xannibi Yeedhe this.
macluumaad Contact Panel
Dhig video call ama maqal ah la xidhiidh ee la doortay:
Marka aad gaarto doonaa macluumaadka of user in si gaar ah, kaliya aad qabto in ay ku kaydiso isaga ama iyada tirada ama email- cinwaanka. Waa inaad ku kaydiso oo keliya macluumaadka taas oo ka dhexeeya lala Face Time.
Ka dib markii .Wadashaqayntaas xogta loo baahan yahay, waxa keliya ee aad u leeyihiin in ay guji badhanka ah ee video call ama audio. Oo wuxuu ku raaxaysan kartaa mid ka mid ah video ugu jeclaa wacaya adeega dunida.
Sidaa halkan macluumaadka aad ka caawisaa si ay u bilaabaan iyo ka dhigi FaceTime on iPad oo waa hawl fudud in la sameeyo on adiga kuu gaar ah. Waxaan rajeynayaa faahfaahin ka caawiyay inaad in ay ku xidhmaan aad saaxiibada iyo qoysaska. Do share with your friends and families so that they can also know the use of Face Time on iPad.